လိင်အမျိုးကွဲပေါင်း ၁၈ မျိုးရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ | Buzzy
လိင်အမျိုးကွဲပေါင်း ၁၈ မျိုးရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ
ထိုင်းနိုင်ငံဆိုတာကတော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ လိင်ပြောင်းလဲထားသူတွေ လိင်ပြောင်းလဲဖို့ ခွဲစိတ်လိုသူတွေအတွက် တကယ့် အကြီးမားဆုံးသော နေရာဖြစ်သလို ၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လိင်စိတ်အမျိုးအစားပေါင်းများစွာ တွေ့ရှိရဆုံးသော နေရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုငျးနိုငျငံဆိုတာကတော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုငျး ကမ်ဘာပျေါမှာ လိငျပွောငျးလဲထားသူတှေ လိငျပွောငျးလဲဖို့ ခှဲစိတျလိုသူတှအေတှကျ တကယျ့ အကွီးမားဆုံးသော နရောဖွဈသလို ၊ ကမ်ဘာပျေါမှာ လိငျစိတျအမြိုးအစားပေါငျးမြားစှာ တှရှေိ့ရဆုံးသော နရောလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဒီမှာဆိုရင်တော့ လိင်အမျိုးကွဲပေါင်း ၁၈ မျိုးရှိတယ်လို့ ဝေါဟာရစာရင်းမှာ သတ်မှတ်ထားပါတယ်တဲ့ ၊ ဒါကို ဂျပန်နိုင်ငံက တွိစ်တာ အသုံးပြုသူတစ်ဦးက လေ့လာပြီး စာရင်းပြုစုကာ သူ့ရဲ. တွိစ်တာမှာ မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
ဒီမှာဆိုရငျတော့ လိငျအမြိုးကှဲပေါငျး ၁၈ မြိုးရှိတယျလို့ ဝေါဟာရစာရငျးမှာ သတျမှတျထားပါတယျတဲ့ ၊ ဒါကို ဂပြနျနိုငျငံက တှိဈတာ အသုံးပွုသူတဈဦးက လလေ့ာပွီး စာရငျးပွုစုကာ သူ့ရဲ. တှိဈတာမှာ မြှဝခေဲ့ပါတယျ။
လိင်ကွဲ ၁၈ မျိုး
အမျိုးသမီးကို နှစ်သက်တဲ့ အမျိုးသား
အမျိုးသားကို နှစ်သက်တဲ့ အမျိုးသမီး
အမျိုးသားလို ဝတ်စားဆင်ယက်တက်သည့် အမျိုးသမီး
ယောင်္ကျားနှင့်တူသော အမျိုးသမီးသို့မဟုတ် Tom ကို နှစ်သက်သည့် အမျိုးသမီး
အမျိုးသမီး ၊ Toms နှင့် Dees တို့ကို နှစ်သက်သည့် အမျိုးသမီး
Tom အချင်းချင်းကြိုက်သည့် Tom
Toms, lesbians, နှင့် အမျိုးသားကို နှစ်သက်သည့် အမျိုးသမီး
အမျိုးသမီး ၊ Gay King နဲ့ Gay Queen တို့ကို နှစ်သက်သည့် အမျိုးသား
အမျိုးသားကို နှစ်သက်သည့် အမျိုးသမီးကဲ့သို့ နေထိုင်သော အမျိုးသား
အမျိုးသားကို နှစ်သက်သည့် ယောင်္ကျားပီသလွန်းသည့် အမျိုးသား
Tom Gay King သို့မဟုတ် Tom Gay Queen ကို နှစ်သက်သော Tom
Toms ကို နှစ်သက်သည့် မိန်းမကဲ့သို့သော Tom
အမျိုးသမီးကို နှစ်သက်သော အမျိုးသမီး
အမျိုးသမီးဘဝဖြင့် နေထိုင်လိုသော အမျိုးသား
Toms ကို နှစ်သက်သော အမျိုးသား
Toms ကို နှစ်သက်သော အမျိုးသမီးဘဝဖြင့် နေထိုင်လိုသော အမျိုးသား
gay men နှင့် Ladyboy ကို နှစ်သက်သော အမျိုးသမီး
Toms ၊ Lesbians နှင့် အမျိုးသမီးတို့ကို နှစ်သက်သော အမျိုးသမီး
ဒီစာရင်းကို တွေ့မြင်ရသူတွေအဖို့ ဒီလောက်တောင် ရှုပ်ထွေးများပြားသလားရယ်လို့ အံ့သြတကြီး ဖြစ်ကြရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဖေ့စ်ဘုခ် အသုံးပြုသူတစ်ဦးက အမျိုးအစား ၇၀ လောက်ထိ ခွဲလို့ရသေးတယ်လို့ ဆိုပြန်ပါတယ်။ အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့ ပိုလို့တောင် ရှုပ်သွားနိုင်ပါသေးတယ်။
လိငျကှဲ ၁၈ မြိုး
အမြိုးသမီးကို နှဈသကျတဲ့ အမြိုးသား
အမြိုးသားကို နှဈသကျတဲ့ အမြိုးသမီး
အမြိုးသားလို ဝတျစားဆငျယကျတကျသညျ့ အမြိုးသမီး
ယောကငြ်ျားနှငျ့တူသော အမြိုးသမီးသို့မဟုတျ Tom ကို နှဈသကျသညျ့ အမြိုးသမီး
အမြိုးသမီး ၊ Toms နှငျ့ Dees တို့ကို နှဈသကျသညျ့ အမြိုးသမီး
Tom အခငျြးခငျြးကွိုကျသညျ့ Tom
Toms, lesbians, နှငျ့ အမြိုးသားကို နှဈသကျသညျ့ အမြိုးသမီး
အမြိုးသမီး ၊ Gay King နဲ့ Gay Queen တို့ကို နှဈသကျသညျ့ အမြိုးသား
အမြိုးသားကို နှဈသကျသညျ့ အမြိုးသမီးကဲ့သို့ နထေိုငျသော အမြိုးသား
အမြိုးသားကို နှဈသကျသညျ့ ယောကငြ်ျားပီသလှနျးသညျ့ အမြိုးသား
Tom Gay King သို့မဟုတျ Tom Gay Queen ကို နှဈသကျသော Tom
Toms ကို နှဈသကျသညျ့ မိနျးမကဲ့သို့သော Tom
အမြိုးသမီးကို နှဈသကျသော အမြိုးသမီး
အမြိုးသမီးဘဝဖွငျ့ နထေိုငျလိုသော အမြိုးသား
Toms ကို နှဈသကျသော အမြိုးသား
Toms ကို နှဈသကျသော အမြိုးသမီးဘဝဖွငျ့ နထေိုငျလိုသော အမြိုးသား
gay men နှငျ့ Ladyboy ကို နှဈသကျသော အမြိုးသမီး
Toms ၊ Lesbians နှငျ့ အမြိုးသမီးတို့ကို နှဈသကျသော အမြိုးသမီး
ဒီစာရငျးကို တှမွေ့ငျရသူတှအေဖို့ ဒီလောကျတောငျ ရှုပျထှေးမြားပွားသလားရယျလို့ အံ့သွတကွီး ဖွဈကွရပါတယျ။ ဒီနရောမှာ ဖစျေ့ဘုချ အသုံးပွုသူတဈဦးက အမြိုးအစား ၇၀ လောကျထိ ခှဲလို့ရသေးတယျလို့ ဆိုပွနျပါတယျ။ အဲ့လောကျဆိုရငျတော့ ပိုလို့တောငျ ရှုပျသှားနိုငျပါသေးတယျ။
အသတ်အန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက်ခံနေရတဲ့အထိ နာမည်ကြီးလာတဲ့ အပြာမင်းသမီး
Moon Sun Energy ရဲ. ၂၀၁၇ ပြက္ခဒိန်ပေါ်က အလန်းစား မြန်မာမော်ဒယ်မလေးများ
သူ့ခွင့်ပြုချက်မရပဲ သူ့ပုံတွေ Facebook မှာ မနားတမ်းတင်နေလို့ဆိုပြီး အမေဖြစ်သူကိုတရားစွဲလိုက်တဲ့ သား
ခိုးစားနေတုန်း ယောက်ကျားကရုတ်တရက်ပြန်လာတဲ့အခါ လင်ငယ်ခမျာကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရသလည်းဆိုတော့
ပြင်းထန်တဲ့ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့  အားပြိုင်မှု ဆက်လက်မြင့်တက်လာ
သင်တစ်ခါမှ မြင်ဖူးမှာ မဟုတ်တဲ့ ပုံရိပ်ဆန်းတွေ